YUPT ကရှယ်ရာတွေပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး YRTA ကဘာပြောသလဲ? - Logistics Guide
1st Look Review
All Categories Air Cargos Air Lines Air Ticketing Services Airport Limousines Airport Services Airports Bags [Gunny] Bags [Paper] Bags [Penang] Bags [Plastic] Bar Coding Equipment & Systems Boat & Ship Ticketing Services Boat Rentals Boat Trips & Excursions Boxes & Cartons Buses [Highway] Buses [Highway] Ticketing Services Car & Truck Rentals Cold Storages Container Services Courier Services & Delivery Services Custom Clearing Agents Distributors Drums & Barrels Filling Stations Fire Extinguisher Refill Services Fire Extinguishers & Fire Fighting Equipment Forklifts Freight Forwarders Helicopter Hires Insurance Agents Labelling & Identification Machines Logistics Services Map Publishers Marine & Aviation Fuel Moving Services Packing/Filling & Wrapping Materials & Equipment Pest Control Services Ports Racking Storage Systems Radio Communication Equipment & Systems Refrigerated Cargo Services Ropes & Hawsers Safety/Road Traffic Safety Product/Sailor's Equipment Scales & Weighing Equipment Ship Crewing Agencies Shipping Agents Shipping Transportation Services Shipyards Storage Services Supply Chain & Logistics Management Training Centres Taxi Services Toll Gates Traffic Police Stations Transportation Services Trolley Carts
Choose Location AhloneAmarapuraAung Myay Thar ZanBahanBotahtaungChan Aye Thar ZanChan Mya TharsiDagonDagon SeikkanDawbonEast DagonHlaingHlaing Thar YarHmaw BiInseinKamayutKyaukseKyauktadaKyeemyin DaingLanmadawLathaMaha Aung MyayMayangoneMingalar Taung NyuntMingalardonMonywaNorth DagonNorth Okkalapa PabedanPakokkuPatheingyiPazundaungPyigyi TagonPyin Oo LwinSanchaungSeik KanShwe Pyi TharSintgaingSouth DagonSouth Okkalapa TadaooTarmweThaketaThan LyinThingangyunYankin
YUPT ရဲ့ဖြစ်စဉ်အပြီးနောက်နေ့မှာ YRTA အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦးတို့ပါဝင်ဆွေးနွေး ထားတဲ့ တင်ပြချက်တွေရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ တင်ပြချက်တွေက ရှယ်ရာရှင်တွေ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု၊မပြု ပြန်မေးထားပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ သူတို့တင်ပြလာတဲ့အပေါ် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ လျာထားထားပါတယ်။ ရှယ်ရာတွေပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေပျံ့နေ တာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြန်မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်က တုန့်ပြန် မှုကိုရတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ရက်ပိုင်းမှာပဲဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
YUPT က YBS ဘက်မှာ ယာဉ်အင်အားအများဆုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သလို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရှယ်ရာပါဝင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုထက် လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိအောင် YRTA အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက် လျာထား ထားခဲ့ပါတယ်။
YRTA တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်ကို Myanmar Logistics Guide ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Logistics Guide
ရနျကုနျသနျးခေါငျစာရငျးဖွငျ့ နယျလိုငျစငျကားစီးနငျးနသေူမြားကို အမညျပွောငျးလြှငျ နယျဝငျဆောငျရှကျပေးမညျ
YUPTကုပ်မဏီအနဖွေငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှု ညံ့ဖငျြးခွငျးကွောငျ့ အရှုံးပျေါနခွေငျးဟု ရှယျယာရှငျမြားဆို
YRTA နှငျ့ YBS တို့၏ (၃) နှဈပွညျ့အခမျးအနား ကငျြးပ
ကညနမှ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျမြား သကျတမျးတိုးခွငျးလုပျငနျးမြားကို နယျလှညျ့ ဆောငျရှကျပေးမညျ
YPS ကဒ်စနစ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုတွင် လမ်းကြောင်းဖြတ်ပိုင်းမှုသာမက ပုံသေနှုန်းအနေဖြင့်ပါ ပေးချေနိုင်ရန် စီစဉ်ထား
No. 614, First Floor ( Left )
Latha Township, Yangon, Myanmar.
Tel :: 09 448001662
E-mail :: [email protected]
Copyright © 2020 Myanmar Logistics Guide .. All Rights Reserved.